10 QAWAANIIN MUHIIM AH OO TAYADA SII KORDHAYA - WARARKA
Bannaanka u khibrad leh waxay leeyihiin cuntadooda u gaarka ah si guul leh u kobcaya yaanyada, kuwaas oo dhan kuwaas oo kala duwan.
Iyada oo aan loo eegin sida aad u wadaagtid cuntooyinkaas, qof walba waxa uu ka heli doonaa wax cusub iyaga oo raacsan guushooda.
Talooyinka hoos ku qoran waxay hubinayaan inay yihiin xaalad cusub oo natiijo fiican leh.
Ku socoshada waddo fudud, laakiin si fiican u socota, xitaa bilawga ayaa helaya natiijo wanaagsan.
10 talooyin ku guuleysi leh oo ku habboon natiijooyin fiican
Nooca ciidda - 5.5-6.5 pH. Iyadoo leh acidity xad-dhaaf ah, yaanyada waxay jiri doonaan jiran: fungus, weerar ah ee microbes iyo fayrusyada. On on carrada alkaline yaanyo caleemo huruud isu beddela - chlorophyll si liidata sameeyay. Sidee loo saxaa xaaladda? Waxaad "acidify" ciidda leh lime, iyo hoos u acidit leh granules sulphate.
Known tayada ugu sareysa iyo kuwa ugu caansanayaa ah kuwa ugu adkaysiiya cudurada "dibadda." Laakiin waa in aynaan ilaawin ku noolaanshaha noocyada kala duwan ee gobollada kala duwan ee Russia.
Tamaandho waxay jecel yihiin meel. Inta u dhaxeysa duurka waa inay ahaadaan 40-60 cm, iyo inta u dhaxeysa sariiraha - 90-1 mitir. Sidaas darteed rhizomes waxay qaadan doontaa biyo iyo nafaqo ku filan, oo aan midba midka kale ka fogeyn. Midhaha tani, dabcan, ayaa ka muuqan doona habka ugu wanaagsan.
Laakiin kuma filna in la siiyo xoriyad xididada, weli waxay ubaahantahay in ay tirtirto tartamayaasha - haramaha. Inta badan yaanyada, sababtoo ah iyaga "gaajo", beergooyska ayaa noqon doona saboolka.
Si aad u sameysid xidido cusub - Tani waa sida nidaamka xididka, kaas oo hagaajiya nafaqada dhirta, - waxaa lagama maarmaan ah in la kufariyo duurka yaanyada.
Kuwa yar yar ee geedo, inta badan waxay u baahan yihiin in la waraabiyo.. Aad u yar yar - maalin kasta, iyada oo aan qallajin caleemaha iyo asliga ah. Kadib - wax yar. In muddada kulul iyo qalalan - hal mar 7-10 maalmood. Oo sidaas darteed in ciidda ma burburin oo aan luminin ogsijiin, waxaad u baahan tahay inaad dabacdo, laakiin marka kaliya biyaha si fiican u nuugo oo ciidda ay qalalan tahay, laakiin maaha ka hor waraabinta.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaadan seegin saacadda xirashada. Burbur xooggan u baxda oo ka hooseeya miisaanka midhihiisa, taas oo markiiba loo maleyn karo in lumay.
Digaag daroogada, ash waa waxa Bannaanka u badan u quudiyaan yaanyada. Helaan ma aha mid adag oo aan qaali ahayn, gaar ahaan tuulada.
Waxaa fiican inaad u qoondeyso meel beerta loogu talagalay noocyo kala duwan: marka hore - hore, ka dibna - bartamihii xilli-ciyaareedka, iyo ka dib-dambe. Sidaas awgeed xilliga xagaaga qaadashada yaanyada waxay dhammaan doontaa xagaaga.
Ha beerin yaanyada ka dib goosashada iyo baradhadaiyo sidoo kale albaabka xiga. Way fiicantahay haddii ay noqon doonto asparagus, karootada, celery, qajaarka, basasha iyo basbaaska.
Haddii aadan la xiriirin beerashada miro-khudradda "xargaha", markaa waxay u dhali doonaan miro sharaf. Waxaa jira talooyin badan oo badan oo ku saabsan mawduucan, laakiin waxa ugu muhiimsan waligaa isbeddelo. Oo haddii this la dayacay, ka dibna jirin Bacriminta qaali ah oo caawin doona, iyo jirin masaafo u dhexeeya duurka u damaanad goosashada. Wax kasta waa inay noqdaan kuwo dhexdhexaad ah, wax walbana waa inay ahaadaan qadarka.